Sam Allardyce ayaa isagoo la hadlaya saxafada sheegey " inuu aad uga xun yahay" in uu baneeyey xilkii tababaraha dalka Ingriiska 67 casho kadib markii loo magacaabey.
Ururka kubada cagta dalka Ingriiska "FA"ayaa qoraal uu soo saarey ku sheegey in hab dhaqanka tababarahaan uu ahaa mid aan loo baahneyn iyagoo xusey in qandaraaskii shaqo ee Sam Allardyce si la isku afgartey daaaqada looga tuurey.
Somalia: Madaxweynaha CAF oo soo gaarey Muqdishu
Soomaliya 17.04.2017. 17:46
MUQDISHU, Somalia - Madaxweynaha xiriirka Kubadda Cagta ee Qaarada Africa (CAF) Ahmad Ahmad iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta oo Isniin ah booqasho ku tagey magaalada Muqdishu.
Wasiirka cusub ee Dhalinyarada iyo Ciyaaraha dowladda Somalia Khadiija Maxamed Dii ...
Cayaaraha 24.01.2016. 16:01